ဤသည် COVENTRY ကျောင်းသားကိုးလ် SPROUSE ရဲ့ဟန်ဆောင် INSTAGRAM ကိုပို့စ်များကိုပြန်လည်ဖန်တီးခဲ့ပြီးပျော်စရာပါပဲ - သတင်း
ဤသည် Coventry ကျောင်းသားကိုးလ် Sprouse ရဲ့ဟန်ဆောင် Instagram ကိုပို့စ်များကိုပြန်လည်ဖန်တီးခဲ့ပြီးပျော်စရာပါပဲ
Shona သည်မြောက်အိုင်ယာလန်မှ Coventry တက္ကသိုလ်တွင်ပညာသင်ကြားနေသည့်ဒုတိယနှစ်ဖြစ်သည်။
သူမသည်သူမ၏အားလပ်ချိန်များတွင် Riverdale နှင့် Zack ၏ Suite Life နှင့် Cody ကြယ်ပွင့် Cole Sprouse ၏ Instagram ရေးသားချက်များကိုပြန်လည်ဖန်တီးပေးခြင်း မှလွဲ၍ ကျန်သူများကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
The Tab Coventry သည် Cole Sprouse ထံမှ tweet တစ်ခုရရန်သူမ၏တစ် ဦး တည်းသောအမျိုးသမီးရည်မှန်းချက်နှင့် ပတ်သက်၍ Shona အားပြောခဲ့သည်။
ငါစဉ်ဆက်မပြတ်ကိုးကွယ်ပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ် @colesprouse သူငါ့ကိုသတိမပြုမိမှီတိုင်အောင် pic.twitter.com/XK95SwqAh9
- Shona Fegan (@ShonaFegan) နိုဝင်ဘာ 15, 2017
အဘယ်ကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်?
ကောင်းပြီ, လူတိုင်းဗိုင်းရပ်စ်သွားချင်တယ်။ လူတိုင်းသည်မီးမောင်းထိုးပြခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ငါ Riverdale စောင့်ကြည့်စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်ကိုးလ်ရဲ့ဇာတ်ကောင်, Jughead နှင့်အတူချစ်ကြသောကြောင့်, ဒါပေမယ့်ငါစတင်ခဲ့သည်။
သူကကျွန်တော့်ကိုပြန်ပို့ပေးမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့သူ့အားတွစ်တာပို့လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာငါကြိုးစားမယ်ဆိုရင်သူပြန်ပြောမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ငါဟာပိုကြီးတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအယ်လ်ဘမ်တစ်ခုပေါ်ထွန်းလာတာနဲ့သူသတိထားမိပြီးပြန်ပို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ Instagram အကောင့်တစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်။ ငါလိုချင်တာကတွစ်တာတစ်ခုပဲ! '
စနေနေ့ထုတ်ဝေမှု? #ShonaDoesCole #FollowMyTwitter #NewPicOnWednesdayAndSaturday
Shona Fegan (@shona_does_cole) မှနို ၀ င်ဘာ ၁၈ ရက်၊ နံနက် ၉:၃၃ အချိန်တွင်ဝေမျှခဲ့သည်။
Jughead ကမင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်လား။ ခင်ဗျားကိုသဘောကျတဲ့သူကဘာလဲ။
'' Jughead ဟာကျွန်မအကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်ပဲ။ သူ၏နောက်ခံသည်ကျွန်ုပ်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောရှုထောင့်အချို့နှင့်ဆင်တူသည်။ ထို့အပြင်သူသည်မိမိအထက်တန်းကျောင်းစက္ကူများအတွက်သတင်းစာဆရာင်ငါသည်လည်းသတင်းစာဆရာပေါ့။ '
'ငါသူတို့ကိုနှစ်ယောက်စလုံးချစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ကိုးလ်လ်ဒေးလ်ကနေကျွန်တော့်ဘဝကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ အမည်းရောင်ဆံပင်ကသူ့ကိုအမည်းရောင်နဲ့အမည်းရောင်ဖြစ်စေတယ်၊ ​​သူ့ကိုငါမကိုးကွယ်နိုင်ခဲ့ဘူးလား?'
ငါ့တ ဦး တည်းသာကိုးကွယ်ပေးခြင်း @colesprouse ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးကျွန်ုပ်တို့၏အသွေးအတွက်မော်ဒယ်ရှိသည် pic.twitter.com/wFPgICgQaX
“ သူငယ်ချင်းတွေ၊ Gabriele နဲ့ Kirsty တို့။ ငါကအပတ်စဉ်တွစ်တာအဖြစ်သာသိမ်းထားတော့မည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် ပိုမို၍ တွစ်တာနှင့် Instagram ကိုရေးသည်ဆိုပါကသူသည်ကျွန်ုပ်ကိုပိုမိုလျှင်မြန်စွာမြင်လိမ့်မည်ဟုသူတို့ထင်ခဲ့ကြသည်။ Gabriele သည်ဓာတ်ပုံဆရာဖြစ်ပြီး Kirsty ကဓာတ်ပုံများကိုတည်းဖြတ်သည်။ '
'' ဓာတ်ပုံရိုက်တာနဲ့တည်းဖြတ်တာဟာများသောအားဖြင့်အတော်လေးမြန်တယ်။ ၎င်းသည်ကန ဦး အကြံဥာဏ်ကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်၎င်းကိုအချိန်ယူရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်သို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လှေကားပေါ်တွင်ဓာတ်ပုံလုပ်သည့်အခါသူသည်တပ်ဆင်ရန်အချိန်များစွာယူခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့တည်းဖြတ်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ headshot ရုပ်ပုံကိုရောက်တဲ့အခါတည်းဖြတ်တာဟာတော်တော်လေးမြန်ပေမယ့်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ဖို့အချိန်အတော်အတန်ကြာခဲ့တယ်။ '
သူကကျွန်တော့်ကိုတွစ်တာတစ်ချပ်ပြန်ပေးလိုက်ရင်ငါကြိုက်တဲ့တခြားနာမည်ကြီးတွေကိုတုပနိုင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ ငါကအားလုံးပျော်စရာနည်းနည်းရဲ့ဗိုင်းရပ်စ်သွားကြဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ '
Shona's Instagram သည် @shona_does_cole နှင့်သူမ၏တွစ်တာဖြစ်ပါတယ် @ShonaFegan ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းအိမ်မှာပြုလုပ်ထားသော Cole Sprouse ကောင်းမြတ်ခြင်းအတွက်နောက်ဆက်တွဲပေးပါ။ သူမနောက်ဆုံးတွင် tweet ပြန်ရလိမ့်မည်ဟုလက်ချောင်းများကဖြတ်ကျော်ခဲ့သည်။